प्रेरणादायी संघर्ष : अपाङ्गता भएकाहरूका लागि पथ प्रदर्शक गंगा
नरबहादुर रायमाझी र हिराकुमारीको दोस्रो सन्तानको रूपमा जन्मिएकी गंगा रायमाझी जन्मिएको तीन महिनामै अपाङ्ग हुन पुगिन् ।
घरभित्र सुताइरहेको अवस्थामा उनी ओछ्यानबाट गुल्टिएर अगेनाको भुङ्ग्रोमा परिन् । तत्कालै तम्घास ल्याएर उपचार गरिए पनि उनका दुवै खुट्टा आगोले पूर्ण रूपमा जलेका रहेछन् ।
तीन महिनासम्म तम्घासमा उपचार गरेपछि गंगा तङ्ग्रिइन् तर उनको खुट्टा घुँडाबाट तल काटेर फाल्नुपर्‍यो ।
गुल्मी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ५ थाप्लेकी गंगा ताते–ताते गर्न समेत नपाउँदै अपाङ्ग बन्न पुगे पनि परिवारले कुनै दुःख, कष्ट नदिई उनलाई हुर्काए ।
गंगाको विद्यालय जाने उमेर भयो । घरनजिकै विद्यालय थिएन । दाइदिदी विद्यालय जाँदा गंगालाई पनि झोला बोकेर पढ्न जाने हुटहुटी चल्थ्यो, तर शारीरिक अवस्थाले विद्यालय जान सक्ने अवस्थामा थिइनन् ।
एकदुई दिन त बाबा, आमा र हजुरबुवाले उनलाई बोकेर विद्यालय पुर्‍याए पनि । तर, कहाँ दैनिक रूपमा बोकेर पुर्‍याउन सकिन्थ्यो र ?
गंगाको मामाघर अर्जे भन्ने ठाउँमा नजिकै विद्यालय थियो ।
उनलाई पढाउनका लागि मामाघर लगियो । मामाघर बसेर खुट्टाका घुँडामा चप्पल अडकाएर चार हातखुट्टाले घिस्रिएर गंगाको पोखरीबारी माविबाट विद्यालय यात्रा शुरू भयो ।
गंगाको संघर्षदेखि विद्यालयका शिक्षक र साथीभाइहरू दंग पर्थे । कसैले खिस्सी पनि गर्थे । तर, त्यसप्रति कुनै ध्यान नदिई उनले विद्यालय यात्रा जारी राखिन् ।
राम्रोसँग पढ्दै गइन् । २०५९ मा एसएलसी परीक्षा दिन तम्घासको अर्जुन बोर्डिङ स्कूलको गेटबाट दुई घुँडामा चप्पल लगाएर घिस्रिँदै गरेकी गंगामा सोही विद्यालयका प्रिन्सिपल दानबहादुर केसी र गुल्मीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माको नजर पर्‍यो ।
पढाइ र उनको अवस्था देखेर उनीहरू दुवैले आगामी शैक्षिक शत्रदेखि उपचारका लागि सक्दो सहयोग बताए । एसएलसी परीक्षा सकेपछि उनको कृत्रिम खुट्टा राखेर हिँडडुल गर्न सहज बनाउन सकिने भन्दै उपचारका लागि पोखराको हरियोखर्क अस्पतालमा केसी र शर्माकै पहलमा गंगालाई लगियो ।
पोखरामा चार महिना बसेर उनले खुट्टा राखिन् । सोही समयमा न्यूजिल्याण्डका नागरिक रब काउन्न अस्पतालको निरीक्षणमा आएका रहेछन्, रबले त्यहाँ गंगालाई देखे ।
शारीरिक त्यस्तो अवस्था देखेका रबललाई गंगाले आफू एसएलसी दिएर खुट्टा राख्न आएको बताएपछि उनी खुशी भए ।
उनले अस्पतालमै गंगालाई सोधे– के पढ्ने इच्छा छ ? । गंगाले सीएमए पढ्ने आफ्नो चाहना भएको रबलाई बताइन् ।
चार महिनामा कृत्रिम खुट्टा राखेर उनी तम्घास फर्किइन् । त्यो बेलासम्म एसएलसीको नतिजा प्रकाशित भइसकेर उनी उत्तीर्ण भएकी थिइन् । तत्कालीन प्रजिअ शर्माले तम्घास इनस्टिच्युटमा सीएमए अध्ययानका लागि गंगालाई निःशुल्क भर्ना गराइदिए ।
अध्ययनका लागि सदरमुकाम बस्दा लाग्ने सबै खर्च भने उनै रबले न्यूजिल्याण्डबाट पठाइदिए ।
१५ महिनामा गंगाले सीएमए पास गरिन् । त्योसँगै विभिन्न तालिमहरू पनि गरिरहेकी थिइन् । त्यहीबेला जिल्ला अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख डा. तारानाथ पौडेलले फोन गरेर करारमा जागिर खान आऊ भन्ने गंगालाई अफर गरे ।
भर्खर पढाइ सकाएकी थिइन्, गंगाले । उनले खुशी साथ अस्पतालमा जागिर शुरू गरिन् । न्यूजिल्याण्डका रब फेरि २०६३ मा अस्पतालको निरीक्षणका क्रममा गुल्मी आइपुगे । त्यो बेला रबले गंगालाई जागिरे देखेपछि अत्यन्त खुशी भए ।
गंगालाई आफूजस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी एउटा संस्था सञ्चालन गर्ने चाहना विद्यालय पढ्दादेखि नै थियो ।
तम्घास आएका रबले उनलाई फेरि सोधे– अबको तिम्रो इच्छा के छ ? गंगाले रबसँग निर्धक्क भएर भनिन्, ‘मजस्तै अपाङ्गता भएकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छु । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्छु ।’
त्यसपछि रबले एउटा संस्था खोल्न आग्रह गरे । त्यसका लागि आर्थिक सहयोग आफूले गर्ने प्रतिबद्धता गंगासँग रबले जनाए ।
रबले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतापछि गंगाकै पहलमा २०६३ सालमा तम्घासमा शुरू भयो आशा अपाङ्ग केन्द्र, जुन गुल्मीकै पहिलो अपाङ्ग केन्द्र थियो । संस्थाको अध्यक्ष जर्नाजन घिमिरे थिए भने गंगा उपाध्यक्ष ।
गंगा जिल्ला अस्पतालको करार जागिर छाडेर ०६३ पछि पूर्णकालीन सेवामा जोडिइन् । यसमा उनलाई माइली बहिनी राधिकाले पनि सहयोग गरिन् ।
आफू जस्तै अपाङ्गता भएकाहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको आशा अपाङ्ग केन्द्रमा अहिले पनि ८ जना बालबालिका बस्दै आएका छन् ।
केन्द्रमा शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने गरी राखिन्छ । संस्थामा बस्नेहरूको संख्या घटबढ भने भइरहन्छ । अप्ठ्यारो परेकाहरू समेत केन्द्रमा आउने भएकाले नियमित बस्नेहरू अहिले पनि ८ जना रहेका छन् । संस्थाबाट अहिलेसम्म ८ सयभन्दा बढीले सेवा लिएको गंगा बताउँछिन् ।
केन्द्रले अहिले जिल्लाभरि नै पुनःस्थापनाका कार्यक्रम गरिराखेको छ । कान नसुन्नेहरूलाई मेसिन दिने, हातखुट्टा नभएकाहरूलाई कृत्रिम हातखुट्टा दिने, ह्वील चेयर दिने, फिजियोथेरापी गर्ने काम केन्द्रले गर्दै आएको छ । यस्ता सामग्रीहरू संस्थाले काठमाडौंबाट मगाएर आवश्यकता अनुसार वितरण गर्दै आएको गंगा बताउँछिन् ।
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परिवार र आफन्तको साथ पाए असम्भव केही नहुने उनको अनुभव छ । आगोले जलेर गंगाको खुट्टा गुमे पनि परिवारले आत्मविश्वास गल्न दिएनन् । उनले पनि आत्मविश्वास बनाइराखिन् ।
अपाङ्गता भनेको असक्षमता होइन, आफू आत्मनिर्भर भएर अरूलाई पनि रोजगारी दिन सक्नुपर्छ भन्ने गंगाको भनाइ छ ।
‘दुर्घटना टार्न सकिँदैन, त्यसलाई सहजरूपमा स्वीकारे मात्र जीवनमा अघि बढ्न सकिन्छ । म पनि सानोमै दुर्घटनामा परेर अपाङ्ग बने । तर, कहिल्यै हिनताबोध गरिनँ । जीवनप्रति गुनासो छैन गर्व छ,’ उनी खुशीसाथ भन्छिन् ।
उनी गुल्मीका अपाङ्गहरूको मुहारमा चमक ल्याउन क्रियाशील छिन् । जीवन नै सुख र दुःखको संयोग रहेको गंगाको बुझाइ छ ।
गंगाकै पहलमा अहिले तम्घासमै संस्थाको दुईतले भवन समेत बनेको छ, जसका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनःस्थापनाका लागि सहज भएको छ ।
उनले संस्था स्थापना भएपछि त्यहाँ ८ सयभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा दिएको गंगाले बताएकी छन् ।
केन्द्रलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अहिले सहयोग गरिरहेका छन् ।
शुरूआतका वर्षमा गंगालाई केन्द्र सञ्चालनका लागि विदेशबाट सहयोग आउँथ्यो । त्यति मात्र हैन, कृत्रिम हातखुट्टा र अपाङ्गता भएकाहरूलाई आवश्यक पर्ने सेता छडी, ह्वील चेयर पनि सहयोग स्वरूप विदेशबाटै आउँथ्यो, तर अहिले केही कम भएको छ ।
गंगाले अहिले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर पुनःस्थापना कार्यक्रम गरिरहेकी छन् । पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरूका लागि अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण गर्ने काम पनि केन्द्रले स्थानीय तहसँग मिलेर गरिरहेको छ । शारीरिक अवस्था कमजोर भए पनि उनी अर्काको कमाइमा आश्रित कहिल्यै भइनन् ।
जागिर थालेपछि गंगाको उच्च शिक्षाको यात्रा रोकिएको थियो । जागिरकै बीचमा केही महत्त्वपूर्ण तालिमहरू पनि लिइन् । संस्थामै पूर्ण समय दिइन् ।
उनलाई पढ्ने रहरको छाडेको थिएन । सेवा गर्ने क्रममै उनले कक्षा ११ र १२ तम्घासकै महेन्द्र माविबाट व्यवस्थापन विषयमा उत्कृष्ट अंक ल्याउँदै पास गरिन् ।
त्यसपछि अर्थशास्त्र र समाजशास्त्र विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरिन् । ‘लामो समय अध्ययनको ग्याप भए पनि रेगुलररूपमा ब्याचलर सकाएँ, अब मास्टर्स पढ्ने अन्तिम धोको छ,’ उनले भनिन् ।
अहिले गंगा दुई कृत्रिम खुट्टाको सहायताले सेवामा तल्लिन छन् । ०६३ सालदेखि सेवामा लागेकी गंगाले करीब एक दर्जनभन्दा बढी सम्मान प्राप्त गरेकी छन् ।
२० भन्दा बढी देशहरू घुमिसकेकी छन् । उनले अमेरिकाबाट सन् २०१० मा स्ट्रङ लिटरसिप सम्मान पाइन् । महिला तथा बालबालिका गुल्मी, आमा सरास्वती मुभिज, रायमाझी कुलखान परिवार, पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री लगायतको हातबाट दर्जनभन्दा बढी पुरस्कार पाइन् ।
संस्थाका लागि आर्थिक संकलन गर्नदेखि केही साथीको निमन्त्रणमा उनी विश्वका विभिन्न २० देश पुगेकी हुन् । हालसम्म उनी न्युजिल्याण्ड, सिंगापुर, अमेरिका, युके, जर्मनी, इटाली, क्रोएसिया, चेक रिपब्लिक, फ्रान्स लगायतका देशमा पुगेकी छिन् । भ्रमणबाट थप अध्ययन र प्रेरणा मिलेको गंगा बताउँछिन् ।
१४ वर्षदेखि अपाङ्गताको क्षेत्रका काम गरिरहेकी ३५ वर्षीया गंगाले धेरैलाई पुनर्स्थापना गरेर स्वावलम्बी बनाएकी छन् ।
अपाङ्गता भएकाहरूलाई केही अवसर दिएमा मात्र पनि अपाङ्गता भएकाहरूको जीवनस्तर उकासिने विश्वास गंगाको छ ।
गंगा अति न्यून आय भएका अपाङ्गता भएकाहरूलाई सीप सिकाएरै स्वरोजगार बनाउन सकिने बताउँछिन् ।
‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दबिएर बस्ने नभई अवसरका लागि घरबाट निस्कनुपर्छ, लगनशील भएर लागेमा धेरै गर्न सकिन्छ, आफूलाई कमजोर ठान्नुहुँदैन,’ उनले भनिन् ।